Ingabe Ugaxekile LwaseRussia Lona Oluyingozi Kakhulu Emhlabeni? - Phendula ngo-Semalt
U-Julia Vashneva, i-8 (Semalt iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Omkhulu, ukhathazekile ngokujulile ngokuthi u-spam waseRussia okwamanje ube yinkinga ebalulekile futhi ungenye yezinhlobo ezimbi kakhulu zogaxekile kwi-intanethi. Okuqukethwe nezihloko ezithunyelwa ebangeni lakho lokungenayo livela ezikhangisweni eziyisisekelo kumagciwane angingozi angakhubaza abasebenzisi kanye namanethiwekhi we-ISP ngezinga elikhulu. Futhi kuphephile ukuthi lokhu kuzothatha ulwazi oluningi olubalulekile, izinsiza kanye nesikhathi.
Njengamanye amazwe, iRashiya isanda kuthatha izinyathelo ezibalulekile ekuvimbeleni ukuhlaselwa kwegciwane kanye nogaxekile. Naphezu kwazo zonke lezo zinyathelo, abasebenzisi emhlabeni wonke basathola ama-imeyili ogaxekile avela eRussia. Ngakho-ke, singasho ukuthi ngeke kwenzeke ukuhlunga ama-imeyili wonke - acompanhe seu pedido correios rastreio. U-SpamCop.net uye wavula amanye amasu okulimaza ama-ID we-imeyli wenani elikhulu labasebenzisi. Kungani kungenakwenzeka ukuzilawula? Isizathu esiyinhloko ukuthi ukungabi khona kwe-DNS kuhlu lwabantu abamnyama. Ayikho uhlelo lokusetha lokuvimbela ugaxekile wenethiwekhi, futhi ngisho nezihlungi azikwazi ukuhlunga ugaxekile nge-Russian ngenxa yokulingana okungenele.
UVardan Kushnir kuthiwa ulandela ugaxekile waseRussia. Wayengumjiniyela onjiniyela odumile owayengathuthuka kule nsimu isikhathi eside. Ngeshwa, lo muntu uthathe umgwaqo ongalungile futhi wagcwalisa i-intanethi ngegaxekile eyingozi nokulimaza. Ngemva kokulwa nohulumeni wakhe ngezizathu zezombusazwe, uKushnir wathatha enye indlela futhi waqala ukusebenzisa isikhali sakhe - ugaxekile. Wasebenzisa ngokuhlakanipha imikhankaso ye-imeyili futhi wathengisa amasheya kaSophim..Into eyodwa eyimisa lo mfana omubi ekuphumeleleni kwakuyisimo saseKansas esidinga ubufakazi bokuthengiselana okwenziwayo. Futhi, lo muntu ukholelwa ukuthi nguye ongemva kwemisebenzi yogaxekile yaseRashiya eyayigxile ezinsongweni zezombangazwe nezenhlalakahle.
Abanye abangane bakhe bathi Kunshir uhlale efuna ukuba umthuthukisi wephrofayeli ophumelelayo, njengoBill Gates. Kodwa wakhetha indlela ehlukile futhi akaphumelelanga nhlobo impumelelo. Ama-antics akhe aqhoshayo kanye nogaxekile owenza u-spam wamholela ekusakazeni ukwesaba ezweni lakubo, okwenza kube nezinkinga eziningi ngisho nokubulala.
Ugaxekile waseRussia namuhla:
Kunshir ushiye umqondo ohlala njalo kuma-spammers kulezi zinsuku. Imilayezo ehlukahlukene yogaxekile yaseRussia ikhuluma ngezinhlelo eziyingqayizivele nezintsha. Abanye babo banikeza imikhiqizo kanye nezinsizakalo ngamanani aphansi, kuyilapho abanye behilelekile ekuthengiseni okungekho emthethweni kanye nokugembula kwe-intanethi. Enye yezinhlobo eziyinhloko futhi ezivelele kakhulu zogaxekile yizikhangisi zokubuka ama-Rolex amanga.
Nakuba abanye abasebenzisi kungenzeka ukuthi babengakuzwanga ngakho ngoba imilayezo ayitholayo ayikwazi ukuhunyushwa ngesiNgisi, abanye bakhathazekile ngekusasa njengoba amabhokisi abo okungenayo agcwele ama-imeyili amaningi ogaxekile. Nakhu ukuthi ungabamba kanjani lawo ma-imeyili aqukethe izilimi zangaphandle:
1. Ungakha izixhumanisi ezihlukene ze-imeyili egcinwe.
2. Kufanele ususe ama-imeyili aphethwe, agcinwe noma akhona emafolda.
3. Kufanele uyidlulisele kufolda yedoti bese uyisuse ngokushesha.
Uma ngabe uthola ama-imeyili amaningi, unganciphisa inombolo yawo futhi uthumele okunye kufolda yogaxekile.